के तपाई डिप्रेशनले पीडित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस्,यी ५ उपाय – Etajakhabar
के तपाई डिप्रेशनले पीडित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस्,यी ५ उपाय
ताजा खबर :-मानसिक तनाव र डिप्रेशन, स्वस्थ र शिष्ट जीवनशैलीलाई निकै प्रभावित गर्छ । यसले मन र मस्तिष्कमा नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्नुको साथै शरीरिक रुपमा कमजोर बनाउँछ । डिप्रेशनबाट बँच्नको लागि यसको पहिचान र उपायको बारेमा जानकारी राख्न अति आवश्यक हुन्छ । डिप्रेशनबाट छुटकारा पाउनका लागि यी ५ उपाय निकै प्रभावकारी सावित छन् ।
१-परिवार र साथी-भाई सँग बढी समय बिताउनु
अत्यधिक तनावको समयमा कसैसँग घुलमिल गर्न मनै नलाग्ने हुन्छ तर यही तरिका तपाईलाई डिप्रेशन हुनबाट रोक्न सक्छ । जब तपाई मानसिक तनाव वा डिप्रेशनको महसूस गर्नुहुन्छ तब आफ्नो परिवारको मानिस वा विशेष मित्रहरूसँग भेट्घाट र समय अधिक बिताउनुहोस् ।
सामाजिक रूपले सक्रिय रहँदा व्यस्त जीवन बन्छ र तनावको कारणहरूबाट ध्यान हट्छ । यसमा नकारात्मक सोच नराखी आफ्नो ऊर्जाको उचित उपयोग गर्नुहोस् । केही समय मै सकारात्मकताको अनुभव हुनथाल्छ ।
३-नकारात्मकत सोचबाट टाढा रहनु
स्वयम् आफैँलाई सकारात्मक बनाउनुहोस् र प्रोत्साहित गर्नुहोस् । आफ्नो खुबी र आजसम्मको उपलब्धिको सूची बनाउनुहोस् । केही उत्तम र उपयोगी कार्य गर्ने योजना बनाउनुहोस् । आफैँलाई प्रेम गर्नुहोस् र हरेक चीजलाई सकारात्मक नजरले हेर्नुहोस् ।
४-प्रयाप्त निन्द्रा लिनुहोस्
तनावग्रस्त हुँदा आफ्नो निन्द्रामा पुरा ध्यान राख्नुहोस् । कम्तीमा आठ घण्टाको निन्द्रा लिनुहोस् । यसले मस्तिष्कलाई आराम मिल्नुको साथै तनावरहित उचित तरिकाले कार्य गर्छ । सानो-तिनो तनावको लागि निन्द्रा एक प्रभावकारी उपचार हो ।
हरेक दिन बिहान घाम ताप्नुहोस् । यसबाट मन र मस्तिष्कलाई आराम मिल्छ र तनाव पनि कम हुन्छ । प्राकृतिक स्थानको भ्रमण गर्नुहोस् र तनावमुक्त जीवनशैली बनाउनुहोस् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २७, २०७४ समय: २२:४२:२१